Qhagamshelana ne-SAHRC | Local Government Action
I-Ofisi yoMkhuseli woLuntu (iPPO) yi-arhente ezimeleyo engumlindi elixhasa iNkqubo yeDemokhrasi elisekwe ngokweSahluko 9 soMgaqo-siseko. Inamagunya okuphanda naziphi na izenzo ezigwenxa nakwesiphi na isigaba sikarhulumente, kuquka oomasipala ize ikuchaze elubala oko. Izenzo ezigwenxa zamagosa karhulumente ziquka ukuxhaphaza, intswela-mbeko okanye ukuziphatha kakubi, ukulibazisa okungeyomfuneko nokunganyaniseki ngeemali zikarhulumente, ubuhlohlesakhe kwanezinye iindlela zolawulo olugwenxa.
Ukuba uza kufaka isikhalazo, kufuneka oko kwenziwe ingekapheli iminyaka emibini emva kwengxaki leyo, nangona iPPO inokulandisa ixesha kwiimeko ezikhethekileyo. Ayizizo zonke izityholo ezikhoyo eziza kuphandwa. I-PPO inelungelo lokukhetha ukuba ilithathe nini na inyathelo.
Ukongeza ekuphandeni izenzo zikarhulumente ezingafanelekanga, uMkhuseli woLuntu uba:
ngumlamli wezicelo ezisuka kwi-PAIA
umphandi/umlamli/umcebisi wokusonjululwa kokungaboni ngasonye phantsi koMthetho woKubeka eLubala okuKhuselekileyo.
Umkhuseli woLuntu unamagunya aphangaleleyo ophando kuquka igunya lokubiza amangqina aze kunika ubungqina befungile okanye akhuphe naluphi uxwebhu aze agqogqe aze athimbe impahla ngokogunyaziso. Ukusilela ekuthobeleni iPPO sisenza solwaphulo-mthetho.
I-PPO isenokugqiba kwelokuba ilamle, ixolelanise, ithethathethane malunga nesisombululo, okanye yenze uphando ize ibhengeze iziphumo, ndawonye nokuphakamisa ukuba kuwiswe isigwebo solwaphulo-mthetho.
Umkhuseli woLuntu unee-ofisi ezingama-26 kuMzantsi Afrika uphela. Iinkonzo ze-ofisi yoMkhuseli woLuntu zifumaneka simahla.
Umnxeba wasimahla woMkhuseli woLuntu: 0800 112 040